Abafazi abaCociweyo beFaux Thong Slipper- Goodao Technology Co, Ltd.
Umzekelo NO.: BLM2160
Ngababini ama-US $ 3.68-3.88 / ngababini
Umbala: BEIGE / PINK
Ngaphezulu: Ulungelelwaniso loboya beFaux ethambileyo
Wamkele ekhaya kwaye utyibilike kwinto emnandi ngakumbi. Khahlela izihlangu zakho kwaye ungene lula kwezi faksi ezinoboya ezivulekileyo
● Indlela yokutyibilika
● Vula iinzwane
● Ithambe kakhulu; Iinkcukacha zoboya
● Uhlobo lisebenza ngobukhulu obupheleleyo kuphela; ubungakanani ukuze ufumane ukulunga kwakho
● Uboya obuyinyaniso: 100% yePolyester
● Indawo ecocekileyo
● Izifakelo eziTyhidiweyo zabafazi
Ezi zitya zendlu yamabhinqa ziluncedo olongezelelekileyo kwimpahla yakho yokunxiba! Izinto ezithambileyo zibonelela ngemfudumalo kunye nentuthuzelo, ngelixa i-outsole yerabha yomelele ivumela ukukhanya kwangaphandle. Ezi slippers nazo zenza izipho ezinkulu! Ezi slippers zibaleka zincinci.
● Ulungelelwaniso lwe-Faux Soft Faux lugcina iinyawo zakho zishushu kwaye zicocekile.
● Isiliphu esikhulu sendlu, esilungele ukuphekelwa ekhitshini, ukudlala nabantwana bakho, ukusela iti yasemva kwemini eyadini, ukuhamba usiya kwibhokisi yeposi, ukukhupha inkunkuma, ukunkcenkceshela ingca, ukuhamba nenja, okanye ukuphuma usayine iipasile. Isipho esihle sokuthoba iinyawo zakho ezidiniweyo ngokuphumla okufaneleyo.
● Yenziwe ngesinyithi esomeleleyo, esinqandiweyo ukuthintela ukutyibilika okanye ukutyibilika nokuba unxibe ezi zihlangu ngaphakathi okanye ngaphandle.
● Ezi zenza isipho esikhulu! Nika izihlobo ezisebenzayo kunye nosapho isiliphu esilungileyo njengezipho zokuphungula iinyawo zabo ezidiniweyo.
Egqithileyo Abafazi bamantombazana Fairy Snowy Slippers Fleece Lined House Shoe
Okulandelayo: Iibhothi ezimfutshane ezineMicro Suede ephezulu kunye nesitayile seFaux Fur Lining House (Abafazi / Amantombazana)
I-Faux Fur Open Toe Slippers
Iifayili zePinki zePinki
Amantombazana amaFaux Slippers
Abafazi beFaux Slippers